Boombale Xijaab xiran - BBC News Somali
Boombale xijaab xiran, ayaa noqday xiddiga ugu dambeeyay ee baraha bulshada. Waxaanu la hadalnay haweenayda ka dambaysa muuqaaladan si aan u eegno sida ay u bilowday boggan Instagram iyo sabab ay u doonayso in Hijarbie ay u noqoto mid matasha gabdhaha muslimiinta ah.
Lahaanshaha sawirka Hijarbie
(Bogga hijarbieee Instagram waxaa taageera in ka badan 31,000 raacayaal ah/ hijarbie) Waxay ahayd fikrad ka timid Haneefah Adam intii ay wadday waxbarashada shahaada master-ka oo ay baranaysa aqoonta farmashiyaha – Ka warran hadii Barbie ay xijaab xirato? “Waxaa ii soo baxay meel bannaan. Ma arag boombale loo xiray xijaab hadda ka hor,” ayay tiri gabadhan ah 24 jirka xirata xijaabka ee muslimka ah. “Bilowgii ma doonaynin in aan wax ku sameeyo – waxay iga ahayd in aan galiyo Instagram-ka – ismana dhihin dadku way jeclaan doonaan oo rabi doonaan.”
(Haneefah Adam iyadaa samaysa dharka boombalaha loo galiyo/ hijarbie:) Ms Adam ayaa bilowday in ay sawirada boombalaha balastikada ka samaysan soo galiso, iyagoo u bixisay Hijarbie – taageero badan ayay heshay. Todobaadyo gudahood bishii December, Ms Adam waxaa taageeray gabdhaha kale ee hijaabka xirta ee ku jira baraha bulshada, oo iyagana la baxay “hijabis”. Ms Adam, oo ka soo jeedda magaalada lorin ee dalka Nigeria, aad ayay ula yaabtay jawaabta laga bixiyay. “Dad badan ayaan horay u arkin shaygan oo kale, wayna jeclaadeen fikradda.” ayay tiri. “Waalidiin badan ayaa doonaya in ay caruurtoodu helaan boombale iyaga u eg.”
(Haneefah Adam ayaa ku qortay sawirkan sharaxaadiis “Haa! Labiska waad kala badbadali kartaa!”/ hijarbie
Caannimada bogga ayaa macnuhu yahay in Ms Adam ayaa sii kordhinaysa waqtiyada ay sawirada galiso, waqti bandanna wuxuu ka gala tolmada dharka. “Anigaa gacantayda ugu labisa,” ayay qiratay. Balse, tolmada dharka ee shay aad u yar, ma aha wax dhib yar. “Waxay qaadan kartaa ilaa laba saac in la sameeyo labis la eg, maadaama ay aad u yar yihiin, sidaa darteed waa in aad uga taxadartaa wax walba.”
(Haneefah Adam waxay sheegtay in boggan aad loo soo dhoweeyay balse in sidoo kale ay soo gaareen hadallo Islaam nacayb ah /hijarbie) Hase yeeshee, fikirka cid walba ma soo dhowaynin. “Markii aan bilaabay dad badan ayaa doonayay in ay iga iibsadaan, balse waxaa kaloo uu dadaalkaygu soo jiitay Islaam-nacayb.” Ayay tiri. “Dad baa aflaago ku bilaabay boombalaha, oo ku dacaayadaynayay in ay bom sidato.” Haneefah, waxay rajaynaysaa in Hijarbie ay tartan ku noqon karto faham-ka xun ee laga qabo dumarka xirta Xijaab-ka. “Dad baa mooda in hadii gabadhu xijaab xiran tahay ay ku nooshahay caburin, oo aysan ahayn wax ay gabdho badan doortaan. “Balse Xijaabka macnihiisu ma aha caburin. Wuxuu u taagan yahay xornimo iyo qofku awooddo in uu iskiis isku daboolo.”
Faashanka “Hijabi” ayaa aad caan u sii noqonaya. Sanadkii hore dukaanka H&M ayaa bilaabay olole xayaysiin oo dumarka muslimka ah ee xiran xijaabka loo adeegsaday. Iyadoo bishii Jannaayo, guriga faashanka ee Dolce & Gabbana uu soo saaray noocyo xijaabyo qaali ah. Marka muxuu noqonayaa mustaqbalka Hijarbie? “Waxaan furay boggan si aan gabdhaha Muslimiinta ah u dhiirigaliyo, si aan u helno boombale na matala oo aan la dheeldheeli karno oo noo eg.” ayay tiri Haneefah.
( Faashanka “Hijarbi” ayaa caan ka sii noqonaya hoy-yada faashanka oo bilaabay qaybo Xijaab ah /Hijarbie) Waxay doonaysaa in ay soo saarto noocyo dhar ku haboon boombalayaasha yar yar iyo kuwa waawaynba, iyo sidoo kale in ay sii waddo bog ay kaga hadasho faashanka. “Runtii waan jeclaan lahaa in aan sii wado Instagram-ka. “Hase yeeshee, ma garnaya halka ay shanta sano ee soo socota gaari doonto. “Waa in aan aad uga fakaraa waxyaabaha oo ku qorayo, waa in aan isku dayaa si aan saamayn u yeesho.”